Valknut ma ọ bụ ọnwụ eriri tattoos: pụtara na atụmatụ | Igbu egbugbu
Ọnye na -bụ Fernando Prada? | | Ihe na egbugbu
Nwetụla mgbe ị hụrụ otu n’ime ebe atọ ndị a jikọtara ibe atọ? Ọ bụ eziokwu na ọ bụ atụmatụ zuru oke n'agbanyeghị na ihe ọtụtụ mmadụ amaghị bụ ezigbo ihe ọ pụtara na / ma ọ bụ akara. Ọ bụ akara nwere nnukwu ihe ọ pụtara.
Aha gị? Valknut, n'agbanyeghị na a makwaara ya dị ka «eriri ọnwụ». Edere isiokwu a maka valknut tattoos na ihe ha pụtara.
1 Valknut pụtara
2 Foto nke Valknut Tattoos
Agbanyeghị na ka anyị jiri obere ihe malite n'akụkọ ya. Kedu ihe aha valknut pụtara ma ọ bụ ebe o si? Ọ dị mma, amabeghị mmalite ezigbo aha ya n'ihi oge ochie ya mana aha dị ugbu a sitere na njikọta okwu "Valk" nke ihe pụtara ya pụtara "Onye agha dara n'omume » na "Knut" nke pụtara "eriri«. Yabụ, njikọ nke okwu ndị a na -emepụta "eriri ọnwụ", anyị na -ekwughachi, ọ bụ nkọwa pụtara.
Ndi valknut O nwekwara njikọ na «Nna nke ihe niile » nke bụ ka amara Odin na akụkọ ifo na omenala Norse. Na -anọchite anya ya dị ka mpi atọ jikọtara ọnụ, “eriri ọnwụ” na ọnwụ na njedebe na mbido ihe niile. Echiche ndị ọzọ na -ekwu na valknut na -anọchite anya njikọta nke alaeze itoolu mejupụtara akụkọ ifo Norse n'ụzọ ndị a:
Triangle nke mbụ na -ejikọ alaeze Asgard, Vanaheim na Jötunheim.
Triangle nke abụọ jikọtara alaeze Alfheim, Svartálfaheim na Midgar.
Triangle nke atọ na -ejikọ alaeze nke Mulpelheim, Niflheim, Helheim.
N'aka nke ya, dị ka a hụrụ na akara ahụ, alaeze ndị a jikọtara onwe ha, na -egosi njikọ dị n'etiti ha na -etolite todo ọnụ na inwe ike ime njem n'etiti ha site na Bifröst.
Na omenala Viking, ekwuru na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị dị njikere ịnwụ n'aha Odin bụ egbugbu ma ọ bụ kanye valknut n'uwe na ngwa ọgụ ha.; Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ ihe nnọchianya ya na chi a nwere njikọ chiri anya.
Ndị ọkà mmụta ndị ọzọ na ndị ọkà mmụta akụkọ ifo Norse na -akọ valknut na nnukwu Hrungir kemgbe nke ikpeazụ nwere obi nwere ihu atọ Thor wee merie ya n'agha mgbe o jiri ihe o ma ama tie ya Mjölner hama. Na mkpokọta, anyị nwere ike kwubie na ihe akara ahụ ka bụ ihe, ugbu a, mepere emepe maka arụmụka mana ihe anyị kwenyere bụ n'ihe metụtara Odin na akụkụ buru ibu nke akụkọ ya.
na alkkpụrụ valknut Ha zuru oke maka ndị na -achọ egbugbu nke akụkọ akụkọ na akụkọ akụkọ ifo gbara gburugburu. Ọdịdị geometric ya aghọọla ewu ewu ụbọchị ndị a na agbanyeghị na ụfọdụ mmadụ na -ejikọ ya na ụfọdụ echiche oke, eziokwu bụ na akụkọ ihe mere eme nke valknut dị puku afọ iri.
Ugbu a, na Nkọwa nke Norse A na -eji ya abụghị naanị akụkụ nke ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme nke Viking, kama, na mpaghara ọdịda anyanwụ nke XXI narị afọ ọ juru ebe niile. Site Otu egwu (metal dị arọ, metal ...) ruo mgbe òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke echiche dị iche iche na ọbụna ụwa sinima na ihe ọchị, akara Viking na akụkọ ifo na -enweta ike n'afọ ndị na -adịbeghị anya ka ọ bụrụ ihe kwa ụbọchị n’ụbọchị anyị taa.
El valknut bụ akara viking nke ejikọtara triangles atọ. Egbu a nwere mgbọrọgwụ miri emi na akụkọ ifo Norse. Eziokwu bụ na nke a bụ ihe ochie ya nke na ọbụna ndị nyocha na ndị ọkachamara n'ọdịbendị Viking anaghị ekwenye n'ihe ọ pụtara na ọrụ mbụ nke valknut. Ebe ọ bụ na enwere triangles atọ, a ga -eburu n'uche ọnụọgụ ọnụọgụ.
na alkkpụrụ valknut eji mee ihe iji gosiputa uwa ohuru na uzo, n'agbanyeghị na enwere ike iji ya na -anọchite anya ọdịnihu, uto onwe onye na ịchọ njem.
Taa a na -ejikwa akara a gosiputa nkwenye ndi n’ekpere. Na agbanyeghị na nke a na -ahụkarị bụ ịchọta naanị triangles atọ mejupụtara valknut, enwerekwa ndị na -ahọrọ isoro ya na akara ndị ọzọ metụtara omenala ahụ, dịka igwe mmadu, anụmanụ jikọtara ya na Odin.
Na mkpokọta, imewe nke valknut na -enye ohere inwe ọtụtụ ọdịiche na -efunahụ ihe ọ pụtara. Site tinye agba, ruo mgbe ịdọrọ ya na mmetụta nke kanye na nkume ma ọ bụ karịa minimalist (naanị ahịrị ndị na -enye echiche nke imewe), agbanweghị ihe ọ pụtara ma ọ bụ ihe dị mkpa, na -enye ohere ka onye ọ bụla kanyere ya na akpụkpọ ahụ ya, nye ya mmetụ nke ya na nke pụrụ iche.
Na nchịkọta, akụkọ ifo Norse nwere ụdị runes na akara dị iche iche na -ebugara anyị akụkọ ya na akụkọ ya na nke nwere nkọwa miri emi ma dị ike, site n'aka ndị na -ese egbugbu, anyị na -agba gị ume ka ị nyochaa ọdịbendị a bara ụba na ihe odide ya nke anyị anụla.
Na foto na -eso akụkọ a, ị nwere ike ịhụ otu nchịkọta dị iche iche nke egbugbu nke okpokoro were echiche.
Foto nke Valknut Tattoos
Fuente). "rel =" igbe mbata [gallery-1] ">
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ofdị egbugbu » Ihe na egbugbu » Ejiji Valknut ma ọ bụ eriri ọnwụ, gịnị ka ọ pụtara?
Ogbugbu Flamingo na ihe ha pụtara